इ. गणेश साह | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय इ. गणेश साह
इ. गणेश साह
सन् १९४९ मा धनुषाको लोहना गाविसमा जन्मेका गणेश शाह पेशाले इञ्जिनीयर हुन् । रूसको मस्कोस्थित पिपल्स फ्रेन्डशिप विश्वविद्यालयबाट मेकानिकल इञ्जिनीयरिङमा स्नातकोत्तर गरेका शाह पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री रहिसकेका छन् । ‘ई-कमरेड’ भनेर पनि चिनिने शाह नेकपा (संयुक्त)सँग आबद्ध छन् । हाल उनी नेपालमा सूचना तथा सञ्चारको विकास अभियानमा लागेका छन् ।
(यस पृष्ठका सामग्री अतिथि सम्पादकको सम्पादन तथा संयोजनमा प्रकाशित हुने गर्दछन् ।
हरेक गाविसमा सूचना केन्द्र राख्नुपर्छ
हिजोसम्म उच्च वर्गको पहुँचमा सीमित सूचनाप्रविधि आज सर्वसाधारणसम्म पुगेको छ । मुलुकलाई विकासतर्फ अग्रसर गराउन र विश्वलाई एउटै सञ्जालमा जोड्न सफल यस प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्नु अबको आवश्यकता हो ।
मुलुक भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएको छ । यसलाई निर्मूल गरी सुशासन स्थापना गर्न ‘ई -गभर्नेन्स’ प्रणाली अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । विकास निर्माणलगायतमा हुने ठेक्कापट्टाको टेण्डर प्रक्रियामा हुने गलत प्रणालीको अन्त्य गर्न ‘ई-बिडिङ’ लागू गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयहरूमार् इ-गभर्नेन्स सञ्चलनमा ल्याउनुपर्छ । यसले कामको प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउने मात्र होइन, पारदर्शी र अझ प्रभावकारी समेत बनाउँछ । यस्तो हुन सकेमा सर्वसाधारणहरू अधिकांश सरकारी सेवा लिनका लागि कार्यालय धाउनैपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ ।
अहिलेसम्म पनि सूचनाप्रविधि प्राविधिक वर्गको पहुँच मात्रमा सीमित हो भन्ने आम बुझाइ थियो । यसलाई हामीले राष्ट्रिय र राजनीतिक मुद्दा बनाउन सकेका थिएनौं । यो जिम्मेवारी राज्यको मात्र होइन । हरेक राजनीतिक दलले यसलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा उठाउनुपर्छ । अबको युगमा विज्ञान र प्रविधिको विषयलाई राजनीतीकरण गरेर राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु आवश्यक छ । यसलाई समग्र दलहरूमार्फत आम जनताको पहुँचको विषय बनाउनुपर्छ । राज्य संयन्त्रप्रति बढेको आम जनताको वितृष्णा तोड्नका लागि पनि राजनीतिलाई सूचनाप्रविधिमार्फत वैज्ञानिकीकरण गर्नु जरुरी भएको छ ।
सूचनाको हकमाथि आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न राज्यले नयाँ संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा नै ‘सूचनाप्रविधि’को विकास र प्रभावकारी प्रयोगका बारेमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि हरेक गाविसमा सूचना केन्द्र राख्नुपर्छ, जसले गर्दा राज्यबाट पाउनुपर्ने सूचनाबाट आम नागरिक वञ्चित हुनु नपरोस् । सर्वसाधारणले सूचनाप्रविधिका साधनको निर्बाध प्रयोग गर्न पाउने अधिकार संविधानमै व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
कुनै बेला खाद्यान्न निर्यात गर्ने हाम्रो मुलुक अहिले खाद्यान्न अभाव झेलिरहेको छ । यसले देशलाई परनिर्भरतातिर धकेलिरहेको छ । यसका लागि ‘ई-एग्रिकल्चर’को विकास गर्नुपर्छ । सूचनाप्रविधिको प्रयोगबाट आधुनिक कृषिप्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसबाट कहाँ, कुन मौसममा कस्तो खेतीबाली लगाउने, उत्पादनको स्थिति, बजारको व्यवस्था, प्रविधिलगायतका बारेमा ग्रामीण किसानहरूले सहजै जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्न, ग्रामीण रोजगारी बढाउन, उत्पादनमा वृद्धि गर्दै गरीबी उन्मूलन गर्न सूचनाप्रविधिलाई प्रभावकारी माध्यम बनाउनुपर्छ । यसतर्फराज्यले नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । छिमेकी देश भारतले यस सम्बन्धमा ठूलै फड्को मारिसकेको छ । त्यहाँका किसानहरूले मौसम, बालीनाली, आफ्ना उत्पादनको बजारमूल्य आदि कुरा मोबाइल फोनबाटै थाहा पाउने भएका छन् । त्यति मात्र होइन, अहिले त्यहाँ मोबाइल फोन नियन्त्रित सिँचाइ प्रविधिको समेत विकास भइरहेको छ ।
अहिलेको विश्व परिवेश सूचनाप्रविधि निर्देशित हुँदै गइरहेको छ । एक्काइसौं शताब्दीको यो पहिलो दशकमा सूचनाप्रविधिको सहयोगले धेरै क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भएको छ । यसको एक सूचकका रूपमा फेसबूकजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई लिन सकिन्छ । अर्कोतर्फयसैका कारण गोपनीयताको हक असुरक्षित बन्दै गएको छ भने व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै प्रकारका सूचनाहरूको सुरक्षामा चुनौती थपिँदै गएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो- ‘विकिलीक्स काण्ड’ । प्रविधिको विकासले नयाँ सम्भावनाहरू दिनुका साथै त्यतिकै मात्रामा कडा चुनौतीहरू पनि सृजना गरेको छ । खासगरी राज्यको गोपनीयताको मुद्दा निकै गम्भीर बनेको छ । सूचनाप्रविधिले ‘विश्वसुरक्षा’को क्षेत्रमा पनि नयाँ चुनौतीहरू जन्माएको छ । यद्यपि, यो प्रविधिले विश्वलाई नै एउटा गाउँमा परिणत गरिदिएको छ । सूचनाप्रविधिले विश्वपरिवेश बुझ्न, नयाँ कुरा सिक्न तथा बाँड्न सजिलो बनाएको छ । विश्वलाई पारदर्शी बनाउन, सूचनाको उत्पादन र विधि थाहा पाउन, विश्वव्यापी सूचनाहरू बाँड्नेलगायत विषयमा यसबाट सिङ्गो विश्वले फाइदा लिन सकेको छ ।
विश्वको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा समेत यसले परिवर्तन ल्याएको छ । अर्कोतर्फ यही सूचनाप्रविधिका कारण नै विश्वमा आतङ्कवादको खतरा बढ्दै गएको छ । त्यसैले सूचनाप्रविधिको विकासलाई मानव सभ्यताको विकासमा प्रयोग गर्नुपर्छ । यसको गलत प्रभाव र प्रयोगबाट सिङ्गो विश्व नै निमेषभरमा हिरोसिमा, नागासाकी बन्न सक्छ । हिजाभन्दा आज सूचनाप्रविधि सरल र सस्तो हुँदै गएको छ । अझै पनि यसको पहुँच आम जनतासम्म पुग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा मुख्य चासोको विषय हो ।
सूचनाप्रविधिमा सर्वसाधारण नेपालीको पहुँचलाई राम्रो मान्न सकिन्छ । यसअन्तर्गत मोबाइल फोन, टेलिभिजन, मोबाइल बैङ्किङ, एफएम ब्रोडकाष्टिङ च्यानलहरू, गाउँगाउँसम्म पुगेको मनी ट्रान्सफर लगायत पर्दछन् । यसबाट आम नेपाली जनताको जीवनस्तर परिवर्तनको लागि सूचनाप्रविधिलाई माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।